Mgbochi ọrịa na ịmaliteghachi mmepụta-Company News-BURLEY
Mgbochi ọrịa na ịmaliteghachi mmepụta
Echiche:141 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2020-02-05 Mmalite: Saịtị
Na nzaghachi maka ọrịa ahụ, ụlọ ọrụ ahụ anabatala usoro iji hụ na mgbochi ọrịa na njikwa na ịmaliteghachi mmepụta. Kemgbe ịmaliteghachi ọrụ na February 17, ụlọ ọrụ ahụ etinyela usoro mgbochi ọrịa na usoro nchịkwa ọrịa ahụ. Na mgbakwunye na disinfection ụlọ ọrụ na nyocha oge ọ bụla, ọ zigakwala ndị ọrụ pụrụ iche ka ha debanye aha n'ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ ahụ, wee duzie nyocha ọkụ na disinfection nke aka na ụkwụ maka ndị ọrụ na-abanye ma na-apụ iji hụ na mgbochi na njikwa ọrịa na ebe.
Burley hazigharị ịmaliteghachi ọrụ n'ụzọ siri ike dịka ihe gọọmentị chọrọ, kpọtụrụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, ma jikwaa kaadị niile maka ndị ọrụ iji nyere ha aka ịlaghachi ụlọ ọrụ ahụ nke ọma. N'otu oge, a na-akwụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ ụgwọ dịka usoro ụlọ ọrụ ahụ si dị n'agbanyeghị na ha nọ n'ọrụ ma ọ bụ nọpụrụ iche. E nyela ndị ọrụ nọ n'ọrụ otu ọnụ ụlọ na bọọdụ na-akwụghị ụgwọ otu ọnwa, wee gbanwee site na osikapa mbụ na nri mbụ gbanwere na igbe, nke ụlọ ọrụ na ngalaba niile ga-achịkọta.
Ka ọ dị ugbu a, ọnụọgụ ndị ọrụ na-alaghachi na ụlọ ọrụ ahụ eruola 60%, ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe amaliteghachiri mmepụta. Ihe mmepụta nke ụlọ ọrụ ahụ na-adabere na iwu ndị e debere tupu ọsọ ọsọ ahụ, a na-eme atụmatụ na ikike nrụpụta gara aga ga-eweghachi site na February 25. N'oge na-abịanụ, ụlọ ọrụ anyị ga-ahazi nrụpụta ma hụ na nchekwa ma nyekwuo onyinye na mmepe mmekọrịta mmadụ.